Madaxweynaha “Guul ayay noogu soo dhamaadeen kulamadii aan la lahayn reer Hiiraan” – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha “Guul ayay noogu soo dhamaadeen kulamadii aan la lahayn reer Hiiraan”
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan oo ay socdaalkiisa ku wehliyaan Wasiiro iyo Xildhibaanno ayaa intii ay ku sugnaayeen Beledweyne waxa ay kulamo la qaateen qeybaha bulshada, waxaana socdaalka wafdiga Madaxweynaha ay ahayd dhameystirka heshiis dhawaan ay Beledweyne ku gaareen odoyaal dhaqameed ka soo kala jeeda labo maleeshiyo beeleed oo ku dagaallamay Beledweyne iyo sidii waxgaradka gobolka Hiiraan ay ugaga soo qeybgali lahaayeen shirka maamul u samaynta gobolada Hiiran iyo Sh/dhexe.
Hase yeeshee odayaasha dhaqanka Beledweyne ayaa markii hore ka soo horjeestay inay ka qeybgalaan shirka maamul u sameynta labada gobol hase ahaatee waa ay oggolaadeen markii dambe oo madaxweynuhu wadahadalo dheer la yeeshay.
” Allaah ayaa mahad leh oo si guul ah inoogu soo dhameeyey kulamadii aan la lahayn reer Hiiraan, kulamadaas oo ujeedadoodu ahaayd la-tashiyo iyo in aan u sharaxno dhisamaha maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe oo qorshuhu yahay in todobaadka soo socda ka furmo magaaladda Jowhar iyo inaan sii xoojino heshiiskii la dhax-dhigay beelahii walaha ahaa ee khilaafka ku dhaxmaray Beledweyn si aysan mar dambe colaad u soo noqon” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale uga mahad-celiyey Odayaasha dhaqanka gacantii ay dowladda federaalka ah ku siiyeen in xal laga gaaro khilaafkii dadka walaaha ah ku dhaxmartay Beledweyn.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa sheegay in dadka aan Muslimka ahayn ay xusi karaan Ciidda Masiixiyiinta
Ciidamada Amisom, ayaa waxay maanta isaga baxeen Deegaanka Ceeljaale oo dhaca duleedka Magaalada Marka